Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Ho ela velona ny delestazy
Inty sy Nday: Ho ela velona ny delestazy
Raha misy lafin-draharaha nahatsiarovan’ny maro an-dRajaonarimampianina tamin’ny fampielezan-kevitra dia ny filazany ny fanafoanana ny delestazy ao anatin’ny telo ka hatramin’ny enim-bolana no voalohany, angamba.
Raha misy koa tato ho ato fitokanan-javatra natrehin-dRajaonarimampianina, dia ny foibe famokarana herin’aratra no isan’ny maro indrindra (Ambohimanambola, Farahantsana, sy ny hafa). Raha misy hevitra ampitainy matetika sy notsindriany koa tao anatin’ny « Fotoam-bita » dia ity famatsiana herin’aratra ity no matetika resahany, ary averimberiny mandrakariva ny « famokarana herin’aratra azo havaozina ».
Raha misy anefa raharaha tsy voavahan’ny fitondram-panjakana Hvm hatramin’izao dia isan’ny mitana ny laharana voalohany, mitovy laharana amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahantrana lalina, ny mbola fitohizan’ny delestazy.
Marina ary ekena fa tsy maharitra toy ny taloha intsony ny delestazy, saingy mateti-pitranga izy io, ary mandrakariva, tato anatin’ny roatokom-bolana izao, dia manodidina ny amin’ny 6 ora sy sasany hariva ka hatramin’ny 8 ora alina eo no fisehony.
Tsy maharitra ny fahatapahana fa mateti-pitranga. Misy fiantraikany any amin’ny tontolom-piainan’ny mpanjifa izany. Misy akony ratsy amin’ireo mbola mamita asa na tsy maintsy miasa amin’ny hariva sy alina izany. Manimba ny fitaovana ampiasaina koa na any ampiasana na any an-tokantrano.
Ny Jirama izay rafitra ara-teknika nanankinana ny fiantohana ny famatsiana herin’aratra any amin’ny olom-pirenena moa dia sady tsy mahay no tsy menatra, mitovy amin’ny tompon’andraiki-panjakana manana fahasahiana mandrakariva manadio tena sy manao fampanantenana poaka aty.
Izahay dia manana fahasahiana milaza fa raha misy teboka iray tsy itokisan’ny vahoaka ny fitondrana Rajaonarimampinina dia io resaka famatsiana herin’aratra io no isany. Sady efa tsy ara-dalàna ny fisitrahan’ny vahoaka azy io, noho ny delestazy, nefa midangana tsy hita noanoa ny sandan’ny faktiora. Raha misy koa antony hidinan’ny vahoaka andalambe ka hanehoany ny tsy fankasitrahana ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana dia io olana amin’ny famatsiana herin’aratra sy ny fidanganany io no iray.
Noho izany, resa-be fampandriana adrisa ny an’Ingahy Rajaonarimampianina hatramin’izao raha resaka famatsiana herin’aratra no asian-teny, ary ny vahoaka dia tsy andairan’izay ronono an-tavo sy abobo izay intsony.
Tsy afaka andraikitra amin’ny fahavoazan’ny firenena nateraky ny delestazy ny fitondram-panjakana ankehitriny sy ny Jirama, na inona fialana olana ataony na inona fanadiovan-tena ambarany.
Hatramin’izao dia maro ny toeram-piasana madinika no tsy mahatafarina ny asany noho ny fahapotehan’ny fitaovany nateraky ny delestazy, nefa ny Jirama tsy manonitra an’izany intsony toy ny tany aloha tany.
Ny voka-dratsin’io delestazy io tany amin’ny orin’asa maro moa dia tsy hita noanoa ny faty antoka naterany, ary tany anivon’ny ankohonam-pianakavina tany koa dia nisehoan’olana maro.
Dia mbola ho sahy hirehareha sy hizahozaho ihany izao ny filohampirenena Rajaonarimampianina sy ny minisitra Lantoniana Rasoloelisoa amin’izany tsy fahombiazana mihoa-pampana izany.